စိတ်ပါတိုင်း – Grab Love Story
”ဟယ် ကိုဇွဲ အရမ်းကြီးကိုထွားလာတာ ကြည့်စမ်း။အခုမှ တကယ့်ယောက်ကျားပီသလာတာ” ”မမကလဲအရမ်းကိုလှလာပါလားဟမ်။တသားမွေးတသွေးလှတဲ့။ မမ မှအစစ်။ဒါနဲ့ ကိုကြီးစိုးခိုင်ရော” ”နင့်အကို စင်္ကာပူသွားတယ် ဒီမှာလေ နင့်တူမ ” ”မမနဲ့တူတယ် ကိုကြီးနဲ့လဲ တူတာပဲ ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ သမီး” ”လေးနှစ်”ဇွဲပိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် အင်္ဂလန်ကနေပြန်ရောက်ပြီး နောက်ရက်မမဝတ်ရည်တို့သားအမိလာလည်တာပင်။မမဝတ်ရည်က အရင်ကထက်ကို လှလာသည်။ကိုယ်လုံးကလဲအရင်ကထက် ပိုပြီးဖွံ့လာကာ ကလေးတယောက်အမေလို့ ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်။ အသက်ကသုံးဆယ်ငါးလောက်ရှိပြီ။သူ့ထက် ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြီး တာမို့သူကခု နှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆိုတော့ မမဝတ်ရည်အေးက သုံးဆယ့်ငါး လောက်ရှိပြီဆိုပေမယ့်ရှိရင်းထက်ဆယ်နှစ်နီးပါလောက်ငယ်နေသည့် ရုပ်။နဂိုကတည်းက အသားဖြူပြီး ချောလှသူမို့ အိမ်ထောင်ကျ ပြီးကလေးတယောက်ရတာတောင် အလှကမပျက်တဲ့အပြင် ပိုပြီး တောင်ချောလာသည်။မမဝတ်ရည်နဲ့ စကားပြောပြီးပြန်သွားတော့ သူလိုက်ပို့ပေးသည်။အိမ်ပြောင်းသွားသည်မို့နောက် သွားလည်လို့ရ အောင်ပင်။မမဝတ်ရည်ယောက်ကျားကိုစိုးခိုင်ကစီးပွားရေးသမားဖြစ်နေကာအဆင်ပြေနေတာမို့ အရင်အိမ်ကိုအိမ်ငှါးထားကာကွန်ဒိုနဲ့နေ သည်။
အဆင်ပြေနေတာတွေ့တော့သူလဲဝမ်းသာရသည်။သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့မမဝတ်ရည်အကြောင်းတွေးရင်းနဲ့အတိတ်ကိုပြန်သတိ ရသွားသည်။တကယ်တော့ကျွန်တော်နဲ့ မမဝတ်ရည်ကဘာမှမတော် စပ်ပေ။အိမ်နီးချင်းအိမ်ချင်းကပ်ရက်။ကျွန်တော့်အဖေကဝန်ထမ်းတဦး အမေကဈေးထဲမှာအထည်ရောင်းသည်။ချမ်းသာတဲ့သူတော့မ ဟုတ်ပေမယ့် ပိုက်ဆံတော့ရှိသည်လို့ပြောရမည်။မမဝတ်ရည်တို့က သားအမိနှစ်ယောက်တည်းမမဝတ်ရည်အဖေကမမဆယ်တန်းနှစ်မှာဆုံးသွားတာ။သူတို့ အမိနှစ်ယောက်တည်း ဒုက္ခရောက်နေတော့ အဖေနဲ့အမေက ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသည်။ဟိုးအရင်ကတည်းက အိမ်ချင်းကပ်နေတာမို့ဆွေမျိုးရင်းလိုပင်။ကျွန်တော့်ကိုလဲ မမဝတ်ရည်တို့က မောင်တယောက်လို သားတယောက်လို။ မမဝတ်ရည်အဖေဆုံးသွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေ ပိုက်ဆံတွေကို မေမေက စီမံခန့်ခွဲကာတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးသည်။ ဖေဖေကဝန်ထမ်းတစ်ဦးပီပီစည်းကမ်းတော့ကြီးသည်။အသက် အရွယ်ကြီးမှ ကျွန်တော့်တယောက်တည်း မွေးပေမယ့် အလို တော့မလိုက်။မေမေက အလိုလိုက်ပေမယ့် ဖေဖေက စည်းကမ်းနဲ့။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းကချူချာသူမို့ ထွားကျိုးင်အောင် အားဆေးအမျိုးမျိုးတိုက်ပေမယ့်အရပ်ကသာရှည်လာပြီးဘေးမ ကားလာ။ပိန်ရှည်ရှည် ကုပ်ကိုင်းကိုင်း။ခါးချည့်လေးနဲ့။မေမေက အစိုးရိမ်လွန်ကာဘယ်သူနဲ့မှပေးမဆော့။အားရင် မမဝတ်ရည် တို့အိမ်မှာပဲနေရသည်။မမဝတ်ရည်နဲ့ဆော့ရသည်။မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆော့ရတော့ မိန်းကလေးဆော့နည်းပဲတက်လာသည်။ကြာတော့ ပျော့နွဲ့နွဲ့ဖြစ်လာသည်။ဖေဖေကမကြိုက်။အခြောက်ဖြစ်မှာကြောက်တာ။
ကျွန်တော်အခြောက်မဟုတ်မှန်း လူပျိုဖြစ်စမှာ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်သိလာသည်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမဝတ်ရည်ကိုစိတ်ဝင်စား သည်။ဘာရယ်မှန်းမသိပေမယ့် မမဝတ်ရည်အိမ်သွားတိုင်း မမဝတ်ရည်အခန်းထဲက အတွင်းခံတွေ မြင်ရင် အောက်က ကောင်ကထောင်လာသလိုလစ်တိုင်းခိုးနမ်းကြည့်ရတာအမော။ မမဝတ်ရည်ကဖက်ထားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းသိ။ကျွန်တော်တို့အိမ်က တစ်ထပ်တိုက်။မမဝတ်ရည်တို့အိမ်ကပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး။ရေချိုးတဲ့ နေရာက အိမ်အပြင်မှာ။ကျွန်တော့်အခန်းကကြည့်ရင် မြင်ရသည်။ ဒါကြောင့်မမဝတ်ရည်ရေချိုးချိန်နဲ့ကြုံတိုင်းချောင်းကြည့်ရတာအ မော။မမဝတ်ရည်က တခါတလေ ကျွန်တော်စာမသိလို့မေးရင် သင် ပေးတက်သည်။သူကစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာတက်နေတာ။တခါ တခါ မမဝတ်ရည်တို့အိမ်မှာ အိပ်ရင် မမဝတ်ရည် အခန်းထဲမှာ အတူတူအိပ်တက်သည်။အဲ့လိုဆိုရင် စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီး။ နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လဲမမဝတ်ရည်တို့သိသွားမှာစိုးတာကြောင့် မအိပ်တော့။ကိုးတန်းအောင်တော့ဖေဖေကကျွန်တော့်ကို အခြောက် ဖြစ်မှာစိုးတာနဲ့အပြင်တွေလွှတ်အပေါင်းအသင်းတွေပေါင်းခိုင်းနဲ့။ မေမေကလဲ သဘောတူသည်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လသူတို့သား ကျွန်တော့်ပုံစံက တကယ့်ကိုအခြောက်သာသာ။လမ်းလျှောက်ရင် နွဲ့နွဲ့။စကားပြောရင်နွဲ့နွဲ့။ဒါကြောင့်ဖေဖေနဲ့မေမေကမွေးထားတာတဦး တည်းသောသား အခြောက်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြိ်း လွှတ်တာ။ ကျွန်တော်လဲအပြင်လောကကိုမထွက်ဖူးတော့စစခြင်းကြောက်မိပေ မယ့် ကိုယ်နဲ့တကျောင်းတည်းဘော်ဒါတွေနဲ့တွေ့ကာ နောက်ပိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လျှောက်သွားတဖြည်းဖြည်းအတတ်ပေါင်းစုံတတ်လာသလို ဗဟုသုတလဲ ရလာသည်။ဆေးလိပ် မူးယစ်ဆေး တော့မလုပ်ပေမယ့် အရက်ကတော့ သောက်တက်လာသည်။
ကြိုက်တော့မကြိုက်။အောကားတွေကြည့် ဘော်ဒါတွေစုံရင် မိန်းကလေးအကြောင်းပြော အတွေ့အကြုံရှိသူတွေက ပြန်ပြောပြ။ ဂွင်းလဲထုတက်လာသည်။ဂွင်းထုတက်လာတော့ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မင်းသမီးကမမဝတ်ရည်။စစခြင်းကငရဲကြီးမှာကြောက်ပေ မယ့်နောက်ပိုင်းရိုးသွားသည်။အောကားတွေထဲကလိုလီးကြီးချင်တာ မို့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြီးအောင်ကြာရင်လုပ်တဲ့မိန်းကလေးစွဲတယ်ဆိုလို့ ကြာအောင် လေ့ကျင့်ရတာအမော။ပြီးရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြီးလာပြီလား အချင်းချင်းပြိုင်ရတာအမော။အပြင်မထွက်တုန်းက မထွက်လို့ထွက်လဲထွက်ရရောမနိုင်တော့။မေမေကဖေဖေမသိ အောင်ဖုံးဖိထားရသည်။ရန်လဲ ဖြစ်တက်လာသည်။လူက ပျော့နွဲ့နွဲ့ မဟုတ်တော့ပေမယ့်ပိန်ရှည်ရှည်ကုပ်ကိုင်းကိုင်းပင်။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းနှစ်လည်ကျော်တော့ မမဝတ်ရည်ယောက်ကျားယူသွားသည်။ ကိုစိုးခိုင်နဲ့။မေမေတို့ကစပ်ပေးတာပင်။တော်လဲတော်ရိုးလဲရိုးတဲ့သူမို့။ ကိုစိုးခိုင်ကလဲမမဝတ်ရည်ကိုချစ်နေတာကြာပြီတဲ့။မမဝတ်ရည်ကလဲ သဘောကျတာနဲ့ပေးစားလိုက်တာ။မမယောက်ကျားရတော့မမ အမေအန်တီစိုးစိုးမြင့်က အိမ်နဲ့ အတွင်းပစ္စည်းတွေကို အမွေပေးခဲ့ ကာရိပ်သာဝင်သွားသည်။သူ့သမီးကိုစိတ်ချပြီဆိုပြီး။နောက်ပိုင်းတခါတခါမှသာလာတော့သည်။မမယောက်ကျားယူတော့အရမ်းခံစားရတာကျွန်တော်။ဘေးလူတွေတောင်သိသည်။ မမက ကိုစိုးခိုင်ကို ပစ်ကာကျွန်တော့်ကိုလာပြီးနှစ်သိမ့်တက်သည်။နောက်ပိုင်းကျွန် တော်လဲ နေတက်သွားသည်။ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့ကျွန်တော့်ကို ဖေဖေကသင်တန်းတွေတက်ခိုင်းသည်။အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းအဓိကတက်ခိုင်းသည်။ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ ”ငဇွဲ ခွေးဖြစ်မယ့်အကောင် ဘယ်မှာလဲ” ”ဖေကြီးရယ် ဒေါသကိုထိန်းပါဦး သားလေးကြောက်နေပါဦးမယ်” ”ဘာကွကြောက်နေပါဦးမယ်ဟုတ်လားငါကတော့ယောက်ကျားပီပီသသဖြစ်စေချင်လို့လွှတ်ပေးတန်သာလွှတ်ပေးထားတာ မင်းက အခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ် ဟုတ်လား ဟေ့ကောင် ငဇွဲ မင်းအပြစ်မင်းသိလား””မသိဘူးဖေဖေ” ”ဘာကွ မင်းစာမေးပွဲကျတာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်” ”သားတယောက်တည်းကျတာမှ မဟုတ်တာ။
သူများတွေလဲ ကျတာပဲ”အဲ့အရွယ်က ဂျွတ်ဆက်ဆက် ဂျစ်ကန်ကန်အရွယ်မို့ ဖေဖေ့ကိုဂျစ်တစ်တစ်ပြန်ပြောတော့ဖေဖေယမ်းပုံမီးကျသလိုပေါက်ကွဲကာ”အေးသူများကျတယ် မင်းလဲကျတယ် အဲ့ဒီတော့ ” ”ခွပ်””အမလေးသေပါပြီ အဖေကြီးရှင်သားကိုထိုးရသလား ” ”ဖယ်စမ်း မင်းပါနာမယ်နော် ခွေးဖြစ်မယ့်အကောင် မင်းက သူများလဲကျရင်ငါလဲကျတာမဆန်းဘူးဆိုတော့သူများအောင်တာ ကျဘာလို့ မအောင်ရတာလဲ ”ပြောရင်း တုတ်ဆွဲကာ ရိုက်ပါသည်။အဲ့အချိန်မှာပဲ”အမလေးသေပါပြီ ဦးဦးးနော် တော်ပြီ လွန်မယ်။ကလေးကို အဲ့လောက်လုပ်ရသလား”မမဝတ်ရည် အပြေးရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားကာ ကာပြီးဖေဖေ့ကို ရန်တွေ့သည်။အရင်ကတည်းက မမဝတ်ရည်က ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ အချစ်တော်။ရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံတက်ပေမယ့်တည်ကြည်တဲ့ အနေအထိုင် အပြောအဆိုကြောင့်ဖေဖေရောမေမေက မမဝတ်ရည် ကိုချစ်သည်။မမဝတ်ရည်က ပြောရဲဆိုရဲရှိပြီး တချို့ကိစ္စတွေကျ မမဝတ်ရည်ပြောရင်လက်ခံသည်။ခုလဲ ကျွန်တော့ကို ရိုက်တော့ မမဝတ်ရည် ဖေဖေ့ကို ရန်တွေ့သည်။”ရိုက်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး သတ်ကိုပစ်ချင်တယ်။နင့်မောင်လုပ်ပုံကကောင်းလားစာမေးပွဲကိုကျရတယ်လို့ ငါ့မျက်နှာ ဓားနဲ့သာလှီးချင်တယ်”ဦးဦးကလဲတခါတလေ ခြေချော်လက်ချော်ရှိမှာပေါ့ အဲ့ဒါကို ခုလိုရိုက်တာလွန်တာပေါ့ အီးဟီးဟီး” မမဝတ်ရည်က ငိုလဲငို ရန်လဲတွေ့နဲ့ ဖေဖေလဲ မရိုက်တော့။ဆူပဲဆူတော့သည်။တော်တော်လေးကြာတော့ မမဝတ်ရည်က ကျွန်တော့်ကို သူ့အိမ်ကိုခေါ်ပြီး ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးထည့်ပေးရင်း ငိုနေသည်။ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူနေလာတာမို့ ကျွန်တော်ခုလိုဖြစ်တော့ ငိုနေတာကြည့်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်မိတာ နောင်တရသလိုလို ရှက်သလိုလိုခံစားမိသည်။ ဒါပေမယ့် ဆေးလိမ်းပေးရင်း ကုန်းကုန်းသွားတိုင်း လည်ပင်းက ဟိုက်နေတော့ ရင်သားဖွေးဖွေး နို့အုံဖွေးဖွေးတွေကို မြင်မိပြန်တော့ စိတ်က ထန်မိပြန်သည်။ကိုစိုးခိုင်ပြန်ရာက်တော့ ဘာဖြစ်တာလဲမေး တော့ မမဝတ်ရည်က ပြောပြသည်။ကိုစိုးခိုင်က အဲ့ဒါတော့ ဦးလေး လွန်တာပေါ့ပြောသည်။
တနေကုန် ကျွန်တော့်ကို ပြန်မလွှတ်။ သူတို့လင်မယားတွက်တွက်ထိုးနေသည်။ညနေကျ အိမ်ကို လင်မယားနှစ်ယောက်သွားတာတွေ့လိုက်ရသည်။ပြန်လာတော့ ”ကဲကိုဇွဲမမတို့နဲ့လာနေ။ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်အောင်ဖြေရမယ် နော်။ဂုဏ်ထူးများများပါအောင် မမတို့ ဦးဦးတို့ကို ကတိပေးခဲ့တယ်။ မောင်လေးကလဲ လိမ္မာရမယ်နော်”နောက်မှသိရသည်။ မမနဲ့ ကိုစိုးခိုင်ကဖေဖေတို့ကိုဒီနှစ်ဆယ်တန်းသေချာပေါက်အောင်ဖို့ သူတို့သင်ပေးမယ်အိမ်မှာပဲထားမယ်လို့ပြောခဲ့တာတဲ့။ဖေဖေတို့ကလဲ မမတို့နဲ့ စိတ်ချတာမို့ လက်ခံလိုက်သည်။လိုအပ်တာမှန်သမျှ ပံ့ပိုးပေးသည်။ကျွန်တော်လဲမမတို့စကားကိုနားထောင်သည်။တနှစ်ကျတဲ့ခံစားမှုကတော်တော်ဆိုးသည်။သူများတော့မသိကျွန်တော်နဲ့ တနှစ်တည်းနေပြီးအောင်သွားတဲ့သူတွေကိုတွေ့တော့အရမ်းသိမ် ငယ်သလိုခံစားရသည်။ဒါကြောင့် စာကိုကြိုးစားသင်ယူသည်။ ကိုစိုးခိုင်ကအားရင်ဗလတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းသည် အဲ့အချိန်ဆိုမမနဲ့တဆူဆူ။ကိုစိုးခိုင်ကစီးပွားရေးလုပ်နေတော့အိမ်မှာ အမြဲမရှိတက်မမဝတ်ရည်ကဘဏ်တစ်ခုမှာလုပ်နေတာမမဝတ်ရည် တို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့စိတ်ရိုင်းဝင်ဝင်လာသည်တခါတလေကျငါအရမ်း တဏှာရူးနေပြီလားတွေးမိပေမယ့် ထိန်းလို့မရ။မမဝတ်ရည်ရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကိုကြည့်ချင်စိတ်ကထိန်းမရနိုင်။မမဝတ်ရည်တို့လင်မယားကကျွန်တော်အိပ်တဲ့အခန်းဘေးကပ်ရက်ကအခန်း။ကျွန်တော်ကခုအရင်တုန်းကမမဝတ်ရည်အိပ်ခဲ့တဲ့အခန်းမှာအိပ်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မမဝတ်ရည်တို့အခန်းထဲကိုချောင်းလို့ရမယ့်အပေါက်ရှာ ပေမယ့် မတွေ့။အခန်းက ပျဉ်ကာထားတာမို့ အပေါက်ကို သုံးလေး နေရာဖောက်လိုက်သည်။မမဝတ်ရည်တို့ကုတင်ကဟိုဖက်နံရံဖက်ကပ်ထားသည်။ကျွန်တော်ကလဲဒီဖက်နံရံကပ်ထားတာမို့ကျွန်တော်အိပ်တဲ့နေရာနဲ့ ကွက်တိနေရာကိုရွေးကာ အပေါက်ဖောက်လိုက် သည်။ချောင်းကြည့်ဖို့အဆင်ပြေပြီမို့အပေါက်ကိုမသိအောင်ပြန်ပိတ်ထားသည်။ပြီးတော့ မမဝတ်ရည်အခန်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန် အခန်းထဲ ဝင်ပြီးဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ရဲ့အနေအထားကြည့်တော့မသိသာ။ သေချာကြည့်တောင် မသိနိုင်။အိုကေပြီ။
အပေါက်ဖောက်ပြီး တဲ့နေ့ ကစပြီးမနက်ဆိုကျွန်တော်ူမမဝတ်ရည်ကိုချောင်းရတာအမော။ ညနေဖက်မမဝတ်ရည် ရုံးကပြန်လာပြီး အဝတ်လဲတဲ့အခါကျ ချောင်းပြီးကြည့်သည်။နောက်ပိုင်း မေမေ ဝယ်ပေးထားတဲ့ Mp4အကောင်းစားက ပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ မနက်ဆိုမမဝတ်ရည် ရေချိုး အဝတ်လဲတာ ချောင်းရိုက် ညနေဆို မမဝတ်ရည် အဝတ်လဲ တာချောင်းရိုက်။ညကျ အိပ်ရာဝင်ရင် ရိုက်ထားတာကို ပြန်ကြည့်ပြီး ဂွင်းထုရတာအကြိမ်ကြိမ်။မမဝတ်ရည်နဲ့ ကိုစိုးခိုင်တို့ မရိပ်မိအောင်လဲ နေရသည်။ဇာတ်ကားတွေကြည့် စာအုပ်တွေဖတ်၊ သူများတွေပြောတာကြားရင်းနဲ့ မိန်းမတခါမှ မလုပ်ဖူးပဲနဲ့ ကျွန်တော် ဖင်ကို လုပ်ကြည့်စိတ်တွေဖြစ်မိသည်။ကျွန်တော့်ထက်ကြီးတဲ့ သူတွေက ဖင်ချရတာ အဖုတ်ထက်ကြပ်တယ် မိုက်တယ်လို့ပြောတော့ ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိ လုပ်ချင်မိသည်။ခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကို စွဲလန်းစေတာ မမဝတ်ရည်ကလွဲ ပြီးဘယ်မိန်းကလေးမှ မရှိ။ဒါကြောင့်မို့ မမဝတ်ရည်ရော ကိုစိုးခိုင်ကပါ ကျွန်တော့်ကို ခြောက်တယ်ထင်နေတာ ရိပ်မိပေမယ့် သူတို့ထင်တဲ့ဟာကို ပြောမနေတော့။ပြောလို့မှမကောင်းတာ။အိမ်မှာ အတူနေရင်း မမဝတ်ရည်ရဲ့တင်တွေရင်တွေကြည့် အခြေအနေပေးရင် ကင်မရာနဲ့ရိုက်။ညဆို စိတ်ကူးယဉ်ပြီးဂွင်းထု။စိတ်ကူးထဲမှာ မမဝတ်ရည်ရဲ့ ဖင်ကိုအကြိမ်ကြိမ် လုပ်မိသည်။ ဒီလိုနဲ့ နေရင်း ကိုစိုးခိုင်က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မူဆယ်ဖက်ကို တစ်လလောက်သွားရသည်။ကျွန်တော်နဲ့ မမဝတ်ရည်က အရင်လိုနေမြဲစားမြဲပင်။
တခါတလေ မမဝတ်ရည်ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေတက်သလို မမဝတ်ရည်ကလဲ နေသည်။ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒါကို သာယာနေတက်သည်။စာကိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားသည်။ကိုစိုးခိုင်ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်လဲ လေးငါးခြောက်လအတွင်း ဗလနည်းနည်းထွက်လာသည်မို့ မမဝတ်ရည်ရောမိဘနှစ်ပါးကပါ သဘောကျနေသည်။အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်လဲ သဘောကျသည်။ကျောင်းခန်းထဲမှာ မိန်းကလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ဘော်ဒါတွေကတဆင့်ပြန်ကြားရတော့ ဘယ်ယောက်ကျားလေးက မသာယာပဲရှိမလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲ ဒိုက်ထိုး ဘယ်ရီရိုက် ကြိုးခုန်နဲ့ အားရင်အားသလို လေ့ကျင့်မိသည်။ကျွန်တော့်ရဲ့ မန်မိုရီကတ်တွေထဲမှာလဲ မမဝတ်ရည်ပုံတွေနဲ့ အောကားတွေပဲပြည့်နေသည်။ရတဲ့မုန့်ဖိုးကိုစုကာ မန်မိုရီကတ်ကို ဝယ်ဝယ်ထားသည်။နှစ်ဝက်စာမေးပွဲဖြေပြီးအမှတ်စာရင်းထွက်တော့ ကျွန်တော် အမှတ်က အရမ်းကောင်းနေတာမို့ ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို ဆုချတဲ့အနေနဲ့ ဘာလိုချင်လဲမေးတော့ ကျွန်တော်လဲ ဟန်းဆက်အကောင်းစားတစ်လုံးလိုချင်တယ်ပူဆာတာနဲ့ဖေဖေကဆင်းကတ်တော့ဆယ်တန်းအောင်မှ ဝယ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ဟန်းဆက်ပဲဝယ်ပေးသည်။ဟန်းဆက်ကပါတဲ့ ကင်မရာကအတော့ကိုကောင်းသည်။မမဝတ်ရည်က သဘောမကျ။ဂိတ်းဆော့ရင် စာဖက်အားနည်းမှာစိုးလို့။ကျွန်တော်က ဂိမ်းဆော့ဖို့မှမဟုတ်တာ။ဒါကြောင့်ဂိမ်းလုံးဝမဆော့ပါဘူးလို့ အာမခံကတိပေးမှ ပေးကိုင်သည်။ကင်မရာက ရုပ်ထွက်က ရှင်းနေတာမို့ ကျွန်တော့်အကြိုက်ပင်။ တရက် ကိုစိုးခိုင် ခရီးကနေပြန်လာသည်။မမဝတ်ရည်လဲ ခါတိုင်းကထက် ပိုပြီးလှနေသလိုပင်။ရေချိုးသနပ်ခါးလိမ်းကာ ထားသည်။ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထုးဆန်းနေသည်။ကျွန်တော့်ကို စာသင်နေရင်း မမဆီက ပျံ့လာတဲ့ သနပ်ခါးနံ့လေးက ဖက်နမ်းချင်စရာ။ကျွန်တော်လဲ သိပ်နေမကောင်းချင်တာနဲ့ စောစောအိပ်ရာဝင်ချင်တယ်ပြောတော့ မမက ခွင့်ပြုသည်။ဒီတစ်ရက်ပဲနော်လို့ပြောပြီးဆေးတိုက်သည်။ကျွန်တော်လဲ စောစောဝင်အိပ်လိုက်သည်။ကိုစိုးခိုင်နဲ့မမဝတ်ရည်က. မေမေတို့အိမ်ဖက်ထွက်သွားသည်။
ကျွန်တော် ဆက်ခနဲ တရေးနိုးတော့ နာရီကြည့်လိုက်ရာ ဆယ်နှစ်နာရီထိုးတော့မယ်။ရေဆာတာနဲ့ အပြင်ထွက်ကာ ရေသောက်ဖို့ အိပ်ရာကထတော့ ”အို ကို တိုးတိုးလုပ်ကွာ ကိုဇွဲ နိုးသွားဦးမယ်” ”မနိုးပါဘူးကွာ။ကိုဇွဲက နေမကောင်းလို့ ဆေးသောက်ပြီးအိပ်နေတာ ဆင်အော်တောင်နိုးမှာမဟုတ်ဘူး” ”အင့် ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ဒီနေ့ အရမ်းပဲ အို ဟင့် ဟင့်” အသံတွေကြားလိုက်ရတော့ ဘာလဲဆိုတာသိလိုက်ရသည်။ဘေးက အပေါက်ကို ဖွင့်ကာချောင်းလိုက်တော့ မမဝတ်ရည်တို့အခန်းထဲ မီးဖွင့်ထားသည်။လားလား မမဝတ်ရည်နဲ့ ကိုစိုးခိုင်တို့ လိုးနေကြသည်။သူကြည့်ရင်း အောက်ကကောင်က ထလာသည်။ကျွန်တော် အနားမှာရှိတဲ့ ဖုန်းကိုယူကာ ဗွီဒိယို ရိုက်လိုက်မိသည်။လက်တဖက်ကလဲ ထောင်နေတဲ့ ငပဲကို ကိုင်ရင်း ထုနေမိသည်။မမဝတ်ရည်က ကုတင်ပေါ်မှာလှဲကာ ကျွန်တော့်ဖက်ကို လှည့်ထားပြီးကိုစိုးခိုင်က နောက်ဖက်ကနေုနေသည်။လက်တွေက နို့တွေကို ကိုင်လိုက် ခါးကိုကိုင်လိုက် မမဝတ်ရည်က ဖင်ကိုနောက်ကို ကော့ပေးလိုက် ကိုစိုးခိုင် လက်ကိုအားမလိုအားမရ ကိုင်လိုက် မျက်နှာက ရှုံ့မဲ့သွားလိုက် နှုတ်ခမ်းကိုက်လိုက်နဲ့ ညည်းနေတဲ့အသံက ရင်ခုန်ဖွယ်။ကျွန်တော်လဲ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပဲ အမိအရ ရိုက်ထားသည်။လက်ကလဲ ဂွင်းထုရင်း စိတ်ကို ချုပ်ထားသည်။တော်တော်လေးကြာကြာ လုပ်နေရင်း ” ဝတ်ရည် ကို့ကို ကုန်းပေးကွာ” မမဝတ်ရည်က ဘာမှမပြော ကုတင် ပေါ် အသာထကာ ကုန်းလိုက်တော့ ကိုစိုးခိုင်က ကုတင်အစွန်းဖက်ရွေ့ ခိုင်းလိုက်သည်။မမဝတ်ရည် ကုန်းတာ ကျွန်တော့်ဖက် ဖင်ပေးထားတာမို့ မမဝတ်ရည်ရဲ့ အဖုတ်ရယ် ဖင်ပေါက်နီညိုညိုလေးကို ရှင်းရှင်းလင်းတွေ့နေ့ရသည်။ကျွန်တော် စိတ်ကိုမနည်းထိန်းထားရသည်။ပြေးပြီးဆောင့်ချင်စိတ်ကို။ကိုစိုးခိုင်က အဖုတ်ထဲကို သူ့လီးထည့်ကာ အားရပါးရဆောင့်နေရာ အခန်းထဲမှာ မမဝတ်ရည်ရဲ့ ညည်းညူသံ ကိုစိုးခိုင်ရဲ့ အားရကျေနပ်သံ အသားခြင်းထိခတ်သံတွေနဲ့ ။ကျွန်တော်လဲ ကြည့်ရင်း ထုနေလိုက်သည်။သူတို့လဲ ငြိမ်ကျသွားသလို ကျွန်တော့်လဲ ပြီးသွားရသည်။ခုလို ကောင်းတာမျိုးတခါမှ မရဖူးခဲ့။ နောက်ရက်မနက် ကျွန်တော်က မျက်နှာပူသလိုဖြစ်ပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်က အေးဆေး။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းမဖြေပြီးမချင်း မမဝတ်ရည်တို့ လင်မယား လုပ်တာကို လေးခါလောက်မြင်ဖူးသည်။ဆယ်တန်းကို ကောင်းမွန်စွာဖြေနိုင်သည်။ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့ မမဝတ်ရည်က မန္တလေးဖက် ပြောင်းသွားသည်။ဒီနှစ်သေချာပေါက်အောင်မှာမို့ ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို စပီကင်တက်ခိုင်းပြန်သည်။ကျွန်တော်လဲ စပီကင်တက်လိုက် ဘော်ဒါတွေနဲ့ လည်လိုက်နဲ့။ဘော်ဒါတွေ နည်းပြကောင်းမှုကြောင့် ကျွန်တော် ဆော်လုပ်ဖူးသွားသည်။ကလပ်သွားရင်း ဇယားညှိကာ ဘော်ဒါတယောက်အိမ်မှာ လုပ်ကြတာ။နောက်ပိုင်း အဲ့ဇယားနဲ့ ပဲ သုံးလေးခါလုပ်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်က တခါမှမလုပ်ဖူးလို့ သူက သေချာသင်ပေးသည်။ကျွန်တော်က လက်တွေ့မရှိပေမယ့် စာတွေ့ရှိတာမို့ အရိပ်ပြရင်အကောင်ထင်သည်။နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ ဖင်ကို လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပြောတော့ လုပ်ခိုင်းတာနဲ့ လုပ်လိုက်သည်။အတော့ကို သဘောကျသွားသည်။နောက်ပိုင်းမှာလဲ ကလပ်သွား ရင်းလာရင်း ကြုံရင်ကြုံသလို လုပ်တက်လာသည်။ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ ကျွန်တော် ဂုဏ်ထူးသုံးလုံးပါလို့အကုန်ဝမ်းသာရသည်။မမဝတ်ရည်က လာလည်တော့ ဖေဖေနဲ့မေမေက မမဝတ်ရည်ကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသလို ကျွန်တော်က လဲ ကန်တော့သည်။သေသေချာချာကို ကန်တော့သည်။ပစ်မှားတာများနေတာကိုး။မမဝတ်ရည်တို့က ကလေးမယူသေးဘူးတဲ့။ရန်ကုန်ကို နောက်နှစ်မှပြန်ပြောင်းရမယ်လို့ပြောသည်။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ ဖေဖေက ကျွန်တော့ကို IELTSဖြေခိုင်းသည်။ကျွန်တော်ဖြေတော့ အမှတ်ကောင်းရသည်။ဖေဖေက ကျွန်တော့ကို သူ့ညီမ ရှိရာ အင်္ဂလန်ကို လွှတ်ပြီးပညာတော်သင်ခိုင်းသည်။ကျွန်တော်လဲ မငြင်းတော့ပဲ သွားမယ်လို့ခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည်။သွားမယ့်နေ့ကျ ဖေဖေမေမေနဲ့ကိုစိုးခိုင်မမဝတ်ရည်တို့ လေယာဉ်ကွင်းလိုက်ပို့သည်။မေမေနဲ့မမဝတ်ရည်က ငိုပြီး မှာတမ်းတွေချွေသလို ဖေဖေနဲ့ ကိုစိုးခိုင် ကဆုံးမစကားပြောသည်။အဲ့နေ့ကိုမေ့မရနိုင်ပါ။ အင်္ဂလန်ရောက်တော့ စာကိုကြိုးစားသင်ယူသလို အပြင်ဗဟုသုတရအောင်လဲ ဒေါ်လေးက သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကူအညီတောင်းကာ အလုပ်လုပ်စေသည်။ကျွန်တော်လဲ နေသားတကျဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဒိတ်လိုက် အိပ်လိုက်၊ သဘောကျတဲ့သူနဲ့တွဲလိုက်နဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေသည်။အရင်က လုပ်ချင်သမျှတွေ ခုမှလုပ်ခွင့်ရတာပင်။ အစက ကျွန်တော် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သေးတယ်လို့ထင်မိလို့ ကြီးအောင် ကြားဖူးနားဝတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်လား ဘဝပေးကုသိုလ်ကြောင့်လားမသိ။ စံချိန်မီ ရုံမက လွန်တောင်လွန်သည်လို့ ကျွန်တော်နဲ့ အိပ်ဖူးတဲ့ မိန်းမတွေကပြောကြသည်။ပိုပြီးကောင်းတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ လီးမှာ အကြောထုံးတာလိုလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ အလုံးသုံးလုံးရှိသည်။စစခြင်းက ကျွန်တော် ကြောက်လန့်ကာ နားလည်တက်ကျွမ်းသူတွေကိုမေးတော့ စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်တက်တယ်လို့ပြောသည်။
ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဝန်တွေပြ ကြည့်တော့လဲ အချိန်တန်ရင် ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြောပေမယ့် မပျောက်ပဲ အလုံးလေးတွေဖြစ်ကျန်နေခဲ့သည်။ဒီကြားထဲ လိင်အဂါင်္မှာ မှဲ့ကလဲပါသေးတာမို့ ငါတော်တော်တဏှာကြီးတဲ့ကောင်ပဲထင်ခဲ့မိသည်။ထင်မိအောင်လဲ ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းကြီးလာမှ အဲ့ဒီအရွယ်က အဲ့လို ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားတက်ကြတာသဘာဝမှန်းသိလာခဲ့ရသည်။အင်္ဂလန်ရောက်ပြီး အတော်ကဲခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားခဲ့သည်။ဒါကြောင့် လဲ နောက်ပိုင်းမှာလူက ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းလာခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းမှာ ရောက်စကလို မဟုတ်တော့ပဲ ရည်းစားအဖြစ်အတည်တကျတွဲဖြစ်သည်။စီးပွားရေးဥပဒေပညာကို မာစတာပြီးတဲ့အထိတက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကုမ္ပဏီတခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းမှာလစာက တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ တွဲစတုန်းက ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အတိုင်း လုပ်ခဲ့ အပေါက်စုံအောင်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။တချို့တွေကကျတော့ နောက်ပေါက်ကို မပေး၊တချို့က နောက်ပေါက်ကို လုပ်ရတာကြိုက်သည်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ အိပ်ခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတိုင်း တခါအိပ်ပြီးရင် နောက်တခါ ထပ်ပြီးနေရဖို့အတွက် ဘယ်တော့မှမငြင်း။ဒါလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကုသိုလ်လား မကောင်းတာလား မသိ။နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရည်းစားတွေထဲမှာ တရုတ်မလေ လီလီနဲ့ ရုရှားသူခရစ္စတီး နှစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော်သဘောအကျဆုံး။
သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မှ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံဆန်းဆန်းတွေရခဲ့သည်။နှစ်ယောက်လုံးက ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံရတာကိုကြိုက်သည်။စကားကြမ်းကြမ်းပြောကာ အသားကိုနာအောင်လုပ်ပေးတာကိုသဘောကျသည်။ဆက်ဆံတဲ့အခါတိုင်း ညှာတာကို မကြိုက်။အံ့သြစရာပင်။ကျွန်တော်လဲ သူတို့နဲ့ကျမှ အဲ့လိုဆက်ဆံရတာကို သိလာ သဘောကျလာသည်။နောက်ပိုင်းတွဲတဲ့သူတွေကိုလဲ အဲ့လို ဖြစ်အောင် သိမ်သွင်းကာဆက်ဆံတက်သည်။တချို့ကကျလဲ မကြိုက်ပေ။မကြိုက်တဲ့သူကိုကျ အတင်းမလုပ်။ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်ရှည်ထားကာ လိုချင်တဲ့ပုံကို သွင်းပြီးဆက်ဆံတက်တာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကျင့်လိုဖြစ်လာသည်။ ”သား အိမ်ထောင်မပြုသေးဖူးလား အသက်ကမငယ်တော့ဘူး။မေမေတို့မြေးချီချင်လှပြီ” ကျွန်တော့်အတွေးတွေပြတ်တောက်သွားရသည်။ ”မေမေကလဲ မမ သမီးလေးရှိတယ်လေ” ”အင်းလေ ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့ သားက မေမေ့သားအရင်းလေ ကိုယ့်မြေးကို ချစ်ချင် ချီချင်သေးတာပေါ့” ”သားကြိုက်တဲ့သူမတွေ့သေးဘူးမေမေ တွေ့ရင်တော့ ယူမှာပေါ့” ”နင့်ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲ” မေမေ မကျေမနပ်နဲ့ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လဲ ရီပြီးကျန်ခဲ့သည်။ပြန်ရောက်တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ရောက်ပြီးနှစ်လလောက်ကတည်းက အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ပြောနေတာ။ကျွန်တော်ကလဲ မျိုးဆက်ရဖို့အတွက်အိမ်ထောင်မပြုချင်။ကိုယ်တကယ်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းမနဲ့ကျမှ ယူမယ်လို့ တွေးထားသည်။ပြီးတော့ မိန်းမကိစ္စက ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ပြီးမထူးဆန်းတော့။ဒါပေမယ့် ခုထိ ကြိုက်ရမယ့်သူမတွေ့။ငယ်ကတည်းက စွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ မမဝတ်ရည်ကို ခုချိန်ထိ မေ့မရတာ အံ့သြမဆုံး။မမဝတ်ရည်ဆိုလို့ သူ့ဆီတောင်မရောက်တာကြာပြီ။တွေ့တိုင်း စိတ်က ထိန်းမရတာမို့ မတွေ့ဖြစ်အောင်ရှောင်ရသည်။ကိူစိုးခိုင်နဲ့တော့ မကြာခဏ ဆုံဖြစ်သည်။
ကိုစိုးခိုင်က အတော်ကို ဝလာကာ စီးပွားရေးမှာလဲ တော်တော်လေးအောင်မြင်နေသည်။အောင်မြင်သူတို့ ထုံးစံ အသောက်အစားလေးနဲ့ မိန်းမကိစ္စလေးကပါရှိလာတက်သည်။သူနဲတွေ့တိုင်း ကေတီဗွီကိုရောက်ဖြစ်တက်သည်။ကိုစိုးခိုင်က ကျွန်တော့်ကို ခုလိုမြင်ရတော့ အတော့်ကို ကျေနပ်ကာ ငါဖြစ်စေချင်တာ ဒီလိုပုံစံမျိုးကွ လို့ တဖွဖွပြောတက်သည်။ကျွန်တော်လဲ ပြန်ရောက်ပြီး ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ကာ ဒီမှာ ယန္တယားတွေ စက်ကြီးတွေ ကားတွေတင်သွင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာ လုပ်နေတာ။ရာထူးကလဲ ကောင်း လစာကလဲ များတာမို့ မငြင်းတော့ပေ။မြို့ထဲမှာ တိုက်ခန်းတခန်းဝယ်ကာ တခါတလေ အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာ နေတက်သည်။ဖေဖေနဲ့မေမေကတော့ ဘာမှတော့မပြောပေ။ ”ကိုဇွဲ ဒါက ကျွန်တော့်ကောင်မလေး မို့မို့ ဒါက စိမ်းအိ ဒါက ဖြူသွယ် မှန်ထားနော် ဒါက ကိုဇွဲပိုင်တဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ဆရာသမားဆိုလဲ ဟုတ်တယ်” ”ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခင်နိုင်ပါတယ်ဗျ ဒါနဲ့ စိမ်းအိရဲ့fbအကောင့်က ဒီနာမည်နဲ့ပဲမဟုတ်လား” ”ရှင်ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့လဲ” ”အော်ကျွန်တော့် အကောင့်ထဲမှာ friဖြစ်နေလို့။တွေ့ဖူးတယ်ထင်နေတာ” ”အော် မှတ်မိပြီ ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့် စိမ်းအိက လဲ မြင်ဖူးပါတယ် ထင်နေတာ ” ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထဲက ကျွန်တော့် တပည့် နိုင်ထွန်းက ကျွန်တော့်ကို သူ့ကောင်မလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လို့ လိုက်သွားလိုက်တာ။တခြားတော့မဟုတ်။သူ့ကောင်မလေးက မန္တလေးက ဘဏ်တခုကဝန်ထမ်း။ရန်ကုန်ကို သင်တန်းလာတက်တာမို့ လစ်တဲ့အချိန် ကျွန်တော့ တိုက်ခန်းကို သုံးချင်လို့ပင်။ကျွန်တော်ကလဲ လိုရင်သုံးဖို့ပြောထားတာပင်။ဘယ်မှာတွေ့တာလဲမေးတော့ လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရင်း မန္တလေးမှာတာဝန်ကျတော့ ကြိုက်သွားတာတဲ့။
ရန်ကူန်ပြန်ရောက်တော့ သူလဲ မအား ကိုယ်လဲမအားနဲ့မတွေ့ဖြစ်ကြပဲ ခုမှ သင်တန်းလာတက်ရင်းတွေ့ရတာလို့ပြောသည်။ဖြူသွယ်က ကျွန်တော့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကိုညီသစ်ရဲ့ကောင်မလေး။ရန်ကုန်သူ။စိမ်းအိက မိထ္ထီလာသူ။ဘဏ်ကနေလွှတ်တဲ့ သင်တန်းခြောက်လလောက်တက်ရမှာ။ရောက်တာတစ်လနီးပါးရှိပြီ။စိမ်းအိက အိမ်ထောင်ကျတာမကြာသေးပေ။ ငါးလလောက်ပဲရှိပြီထင်သည်။fbမှာfriဖြစ်တာဘယ်ကတည်း ကမှန်းမသိပေမယ့် သူမပုံတွေနောက်ပိုင်းမှာ ခပ်စိပ်စိပ်တက်လာလို့ သတိထားမိတာ။လူကတော့ ခုခေတ်မော်ဒယ်တွေလို။ပိန်ခြောက်ခြောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပါးပါးလျားလျားပင်။ကိုရီးယား မင်းသမီးတွေကိုအားကျလို့လားဘာလားမသိ။ဖင်သေးရင်သေးတွေ။အရမ်းကြီးသေးတာမဟုတ်ပေမယ့် တနိုင်လေးတွေပင်ပြောရမလား။ဖြူသွယ်ကတော့ တောင့်တောင့်ပင်။နောက်ပိုင်း ကိုညီသစ်က ကျွန်တော့်ကိုသူ့ကောင်မလေးနဲ့လည်ချင်တိုင်း အဖော်ခေါ်ကာ နိုင်ထူးကလဲ ပါလာတက်သည်။ပါလာမှာပေါ့ ဖြူသွယ်က အိမ်ကနေထွက်ဖို့ စိမ်းအိနဲ့ မို့မို့ ပါမှဖြစ်မည်ကိုး။စိမ်းအိနဲ့ မို့မို့က အဆောင်မှာနေကြတာဆိုတော့ နည်းနည်းလွတ်လပ်သည်။စိမ်းအိက သိပ်မလိုက်ချင်ပေမယ့် မို့မို့က သူ့ဘဲနဲ့တွေ့ချင် ဖြူသွယ်ကလဲ ထိုနည်းတူမို့ အတင်းခေါ်သည်။နိုင်ထူးနဲ့ ကိုညီသစ်ကလဲ စိမ်းအိအဖော်ရအောင် ကျွန်တော့်ကို ခေါ်တာ။ကျွန်တော်က လူလွတ်ကိုး။ပြီးတော့ ကျွန်တော်မှာကားလဲရှိတာကြောင့်ပါမည်။စိမ်းအိကလဲ အိမ်ထောင်သည်မို့ ပြသာနာမရှိပေ။
သံယောဇဉ် စက်ဝန်း ဒါကြောင့်တပတ်မှာနှစ်ရက်လောက်တော့ လည်ဖြစ်တက်သည်။လည်တိုင်း နိုင်ထူးရော ကိုညီသစ်ပါအတွဲကိုယ်စီနဲ့ပျောက်သွားတက်ကြတော့ များသောအားဖြင့် စိမ်းအိနဲ့ကျွန်တော်သာကျန်ခဲ့ရသည်။ကြာလာတော့ ကျွန်တော်စိမ်းအိကို ကြံကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမိသည်။တခြားတော့မဟုတ်ပေ။သူမရဲ့ သစ္စာတရားကို ခိုင်မာရဲ့လားဆိုတာ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လိုင်းပေါ်မှာ ယောက်ကျားကို ဘယ်လိုသတိရကြောင်း ဘယ်လိုလွမ်းကြောင်း ဘယ်လိုသတိရနေတဲ့အကြောင်းတွေတဖွဲ့တနွဲ့လုပ်နေတာ ကျွန်တော်က သိပ်မယုံချင်။အိုဗာဖြစ်တယ်လို့မြင်သည်။ကျွန်တော်ခင်ပြီး သူ့ယောက်ကျားဖြိုးဝေ သုံးလေးခါလာတာဆုံဖူးသည်။နောက်ပိုင်း မအားတာနဲ့ လာတာမတွေ့ရတော့။ကျွန်တော်နဲ့ခင်လာတာသုံးလကျော်လေးလလောက်ရှိပြီ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နဲ့ တတွဲတွဲဖြစ်လာသည်။ဒါကို သူ့ယောက်ကျားလဲ သိသည်။လိုင်းပေါ်မှာဆုံတိုင်းဂရုစိုက်ပေးဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးဖို့မှာတက်သည်။ စိမ်းအိနဲ့ကတော့ လိုင်းပေါ်မှာညတိုင်းစကားပြောဖြစ်သည်။ကျွန်တော်လဲ ကလိတိတိ ရိတိတိပြောတော့ စိမ်းအိကလဲ ပြန်ပြောသည်။ကျွန်တော်စလိုက်ရင်ပါတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်သည်။ ”ကိုဇွဲရေ မင်းအားရင် ဆုံရအောင်လေ။ငါတို့လဲ နေပြည်တော်ရောက်နေတာဟ” ”ဟုတ်လားဆုံမယ်လေ။ဘယ်မှာဆုံမလဲ” စတိတ်ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းဝေယံ။ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်နေတုန်း ဖုန်းဆက်လာတာ။သူကလဲ ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုမှာ မန်နေဂျာတစ်ဦး။
ဆယ်တန်းတုန်းကနှစ်ချင်းပေါက်အောင်ကာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တာ။ကျောင်းတုန်းက စာတော်တဲ့သူမို့ ကျွန်တော့်ကိုအဖက်မလုပ်။နှိမ်တောင်နှိမ်တက်သည်။ကျောင်းပြီးလို့ စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ရင်း သူ့ရဲ့ဆရာရဲ့သမီးနဲ့ညားကာ နေရာကောင်းရလာတာလို့ ဘော်ဒါတွေပြောလို့သိရသည်။နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ ကျွန်တော့်အကြောင်းသိကာ လေးလေးစားစားဆက်ဆံလာသည်။ ညဖက်ကျတော့ သူတို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော် ဆုံဖြစ်ကြသည်။ဒီကောင်က သမီးတယောက်ရနေပြီ။မိန်းမက နှစ်ဆယ့်ငါးလောက်ရှိပြီ။ကလေးကတော့ ငါးနှစ်နီးပါးသမီးလေး။မိန်းမနာမည်က ဥမ္မာဦး။အရမ်းကြီးမလှပေမယ့် ပြင်တက်ဆင်တက်ဝတ်တက်တာမို့ ကြည့်ကောင်းသည်။ကိုယ်လုံးကတော့ မဆိုးပေ။အရပ်ကမဆိုသလောက်ပုတယ်ထင်ရပေမယ့် သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးက ကွက်တိ။ကြည့်ကောင်းသည်။နေပြည်တော်မှာတပတ်လောက်ကြာပြီး သူတို့တွေနဲ့လည်ဖြစ်သည်။ဝေယံတခါတလေမအားတဲ့အခါကျဥမ္မာဦးတို့သားအမိကို ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ပို့ပေးရသည်။အတော်လေးလဲ ရင်းနှီးလာသည်။ ကျွမ်တော်နေပြည်တော်က ပြန်လာတော့ ကိုညီသစ်တို့ နိုင်ထူးတို့ အပူကပ်ကြသည်။ကျွန်တော်မရှိလို့ သူတို့ကောင်မလေးတွေနဲ့မတွေ့ရ။ ”မင်းတို့ကလဲကွာ ငါမရှိလဲ ဘာဖြစ်လဲ သော့ထားခဲ့တာပဲ။သွားပေါ့” ”မင်းကဘာသိလဲ မင်းမရှိတော့ စိမ်းအိက တယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဆိုပြီး မလိုက်တော့ မို့မို့ လဲမထွက်ရဘူးလေ။အဲ့လိုဆိုတော့ ဖြူသွယ်လဲ ဘယ်ထွက်ရတော့မလဲ” ”ကြည့်လုပ် ကိုညီသစ် ဟိုက အသက်က ခုမှ ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲ ပူလာကာမှ ဟင်း ဟင်း” ”လခွမ်း နှစ်ဆယ့်သုံးလောက်ရှိပါပြီဟ။မငယ်တော့ပါဘူး။
အဲ့လောက်လဲ မညံ့ပါဘူးမင်းကလဲ။သူတို့ဟာသူတို့ ကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။စိမ်းအိတောင် လင်ရနေပြီဟာကို မငယ်တော့ပါဘူး” ”ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်နိုင်ရင်ပြီးရော” ”အေးပါ ငါတို့ အဲ့နေကျရင် ကလပ်ကို သွားမယ်။ပြီးရင် မင်းက စိမ်းအိကို မင်းဘော်ဒါအိမ်ကို ပို့ပေးလိုက်။ငါတို့က ဟိုတယ်သွားနှပ်မယ် ဖြစ်လား” ”ခင်ဗျားတို့ကဗျာ ကြာရင် စိမ်းအိက သူ့ယောက်ကျားနဲ့မညားပဲ ကျွန်တော်နဲ့ ညားမယ်အပေါက်ဗျ” ”လုပ်ပါကွာ ကိုဇွဲကလဲ ပိုင်ပါတယ်။ဟိုတခါတုန်းကလဲ စိမ်းအိကို ကိုဇွဲ ဘော်ဒါအိမ်မှာပို့ပေးတာပဲကို အာစိကလဲ အားကိုးပါတယ်” ”ကဲပါပြီးရော တအားတော့ ညည့်မနက်စေနဲ့နော်။တော်ကြာ ငါ့ဘော်ဒါက အိပ်သွားရင် ငါတိုင်ပတ်မှာ” ”အိုကေ” ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် သောကြာနေ့ညကျတော့ မို့မို့တို့သုံးယောက်ကို ခေါ်ကာ လျှောက်လည်ကျသည်။စိမ်းအိနဲ့မို့မို့က ဖြူသွယ်တို့အိမ်ကိုသွားကာ သင်တန်းက စာတွေ အတူလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးဖြူသွယ်ကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးအဆောင်မှာ အဝတ်အစားလဲကာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်လာကြတာ။စားကြသောက်ကြရင်းနဲ့ ကလပ်ကိုသွားကြသည်။ကလပ်မှာထပ်သောက်ရင်း ကကြသည်။စိမ်းအိက ဂျင်းဘောင်းဘီ ပေါင်လောက်အတိုအကြပ်ကိုဝတ်ကာ အောက်က ရှူးစီးထားသည်။အပေါ်က အင်္ကျီလက်ပြတ်အကြပ်အနက်ကို အပေါ်က ဂျင်းကုတ်ထပ်ထားသည်။နည်းနည်းလဲမူးနေကာ အသားကုန်ကနေသည်။မောလိုက်သောက်လိုက်ကလိုက်နှင့်တဖြည်းဖြည်း ညနက်လာသည်။ဟိုအတွဲတွေက ဘယ်ချိန်လစ်သွားသည်မသိ။ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်တော့ ပြင်ဦးလွင်ရောက်နေသည်တဲ့။ကျွန်တော်လဲ လေသွားသည်။စိမ်းအိကို ဘယ်ပို့ရမလဲ စဉ်းစားနေသည်။စိမ်းအိက ကျွန်တော့်ကိုဆွဲခေါ်ကာ ကနေပြန်သည်။ကျွန်တော်လဲ မထူးဘူးဆိုပြီးစိမ်းအိကို ဖက်ကာ ကလိုက်သည်။ကရင်းနဲ့ ဖင်ကိုကိုင်လိုက် ခါးကိုဖက်လိုက်လုပ်နေသည်။
စိတ်ကလဲ ပါလာတာမို့ စိမ်းအိကို ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကိုပဲ ခေါ်သွားတော့မည် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိကိုပြန်မယ်အတင်းခေါ်တော့ စိမ်းအိက မပြန်ချင်ပြန်ချင်နဲ့ လိုက်လာသည်။မူးကလဲ မူးနေပြီ။မို့မို့တို့ကိုမေးတော့ လစ်သွားပြီပြောလိုက်သည်။သူ့ကို ဘယ်မှာပို့မှာလဲမေးတော့ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော်တိုက်ခန်းမှာပြောလိုက်တော့ ကြောက်တယ်လို့ပြောပေမယ့် မငြင်း။ကျွန်တော်လဲ ဘီယာဝင်ဝယ်ကာ တိုက်ခန်းကိုမောင်းလာခဲ့လိုက်သည်။အခန်းထဲရောက်တော့ ဘီယာဖွင့်ကာ စိမ်းအိကိုတိုက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်လဲ သောက်လိုက်သည်။စိမ်းအိလဲ တော်တော်မူးလာတာမို့ ကျွန်တော်လဲ အခန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။အခန်းထဲရောက်တော့ စိမ်းအိနှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။စိမ်းအိကလဲ ပြန်နမ်းသည်။မူးနေလို့ပဲလား ဘာကြောင့်လဲတော့မသိ။မငြင်းပေ။တင်ပါးတွေကို ညှစ်ကိုင်ရင်း အနမ်းကြမ်းကြမ်းပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ အပေါ်က. ဂျင်းကုတ်ကိုချွတ်လိုက်ကာ လက်ပြတ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ဘရာအနက်ကိုပါချွတ်လိုက်ရင်း နို့တွေကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်သည်။စိမ်းအိ အသက်ရှူသံမြန်လာသည်။ကျွန်တော်လဲ နို့တွေကို ငုံ့ကာစို့လိုက်ရင်း အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်သည်။တင်းမာနေတဲ့လီးကိုစိမ်းအိလက်ကိုယူကာ ကိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်းနို့တွေကိုစို့ ဂျင်းဘောင်းဘီအတိုကိုချွတ်လိုက်သည်။ရှူးကိုမချွတ်တော့ပဲ ဘောင်းဘီကိုရအောင်ချွတ်လိုက်သည်။ပင်တီပန်းရောင်ဂွဆုံမှာ အနည်းငယ်စိုနေသည်မို့ စိမ်းအိ စိတ်ထနေမှန်းသိလိုက်သည်။ပင်တီပါချွတ်လိုက်ရင်းပေါင်ကိုကားကာ အဖုတ်ကိုကလိလိုက် အစေ့ကိုကလိလိုက်လုပ်နေလိုက်သည်။စိမ်းအိ ပါးစပ်က မပီမသငြီးရင်းနဲ့ကော့ကော့တက်လာသည်။လီးကိုကိုင်ထားတဲ့လက်က တဖြည်းဖြည်းမြန်လာသည်။မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ”ကိုဇွဲ လုပ်ပေးတော့ စိန်းအိ မခံနိုင်တော့ဘူး” ကျွန်တော် ပြုံးလိုက်ပြီး ”ကိုယ် လိုးပေးရတော့မလား” ”အင်း လိုးပေးတော့” ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိပေါင်ကို ကားလိုက်ကာ ဖင်အောက်ကနေ ခေါင်းအုံးတလုံးယူပြီးခုလိုက်သည်။လီးကိုကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲကို အထည့်သေးပဲ အစေ့ကို ပွတ်လိုက်ရာ စိမ်းအိမှာ တဟင့်ဟင့်နဲ့ ငြီးကာ လုပ်ခိုင်းနေတော့သည်။
ကျွန်တော်လဲ အဖုတိထဲကိုထည့်လိုက်တော့ တင်းကြပ်စွာဝင်သွားသည်။အလိုးမခံရတာပဲ ကြာလို့လား ကျွန်တော့လီးကပဲ သူ့ယောက်ကျားထက်ကြီးလို့လားမသိ စီးပိုင်နေသည်။အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက ဖြည်းညှင်းစွာဝင်သွားတဲ့ လီးနဲ့အတူ လိပ်ကာပါသွားသည်။ ”အ ဟ ဟအင့် အင့်”_စိမ်းအိ နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ကာ ရင်ပတ်ကိုလက်နဲ့အသာတွန်းထားသည်။ကျွန်တော်လဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်ရင်းအဆုံထိဝင်သွားတော့ ထုတ်ခနဲ ဖြစ်သွားကာ လီးက ကျဉ်ခနဲ ဖြစ်သွားသလို စိမ်းအိလဲ အင့်ကနဲ ကော့တက်သွားသည်။ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထုတ်လိုက်တော့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက လိပ်ပြီပြန်ပါလာသည်။ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်နေရင်းနဲ့အချက်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်လာတော့ အဖုတ်ထဲက နေသားကျသွားသလို အရည်တွေကလဲ ရွှဲနေတာမို့ အဝင်အထွက်ချောမွေ့လာသည်။စီးစီးကြပ်ကြပ်နဲ့လိုးလို့ကောင်းနေတာမို့ ကျွန်တော်လဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ စိမ်းအိ တအိအိနဲ့ မပီမသငြီးနေသည်။လက်တွေက လက်မောင်းကို တင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ဖင်က ဆောင့်ချက်နဲ့အတူ ကော့ကော့ပေးနေသည်။အရမ်းကိုကောင်းနေသည်။ကျွန်တော်လဲ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုက်သည်။လက်တွေက နို့နှစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ထားရင်း ပါးစပ်ကလဲ ”စိမ်းအိ ကောင်းလား ကိုယ်လိုးနေတာ ခံလို့ကောင်းလား” ”ကောင်းတယ် ကို လုပ်လုပ် စိမ်းအိ ပြီးချင်လာပြီ အ့ အ့ လုပ် ကောင်းတယ် ဟ ဟ” ကျွန်တော်လဲ မေးလိုက်ဆောင့်လိုက်နဲ့လုပ်နေရင်း စိမ်းအိ အီးခနဲအသံနဲ့အတူ ပြီးသွားသည်။လက်တွေက ကျွန်တော့်ကိုအတင်းဖက်ထားရင်း ဖင်ကို ဆက်ခနဲကော့ကော့ပေးလာသည်။ကျွန်တော်လဲ အသာရပ်ထားလိုက်ရင်းနို့တွေကိုစို့လိုက်သည်။
ခနကြာမှ ”စိမ်းအိ ကိုယ့်ကို ကုန်းပေး ကိုယ် မပြီးသေးဘူး” စိမ်းအိလဲ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း ကုန်းပေးသည်။ကျွန်တော်လဲ ကုန်းပေးထားတဲ့စိမ်းအိရဲ့ပေါင်ကိုနည်း နည်းကားလိုက်ရင်း တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်ရာ ခရေ ညိုညိုလေးက ပါကင်။အိုကေ ဒီခရေကိုဖွင့်ဖို့ ကျွန်တော် တွေးလိုက်သည်။နော က်ကျရင်။ကျွန်တော်လဲ ခရေပွင့်ကို လက်မနဲ့အသာပွတ်လိုက်ရင်းအဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်သည်။တချက်ချင်းခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်နေလိုက်သည်။လီးထိပ်က တထုတ်ထုတ်နဲ့ တိုက်မိနေကာ အရမ်းကောင်းနေသည်။စိမ်းအိလဲ ကျွန်တော့ဆောင့်ချက်နဲ့အတူ ပြန်ပြီးစိတ်က ပါလာသည်။ကျွန်တော်လဲ တင်ပါးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်လိုက် ဆောင့်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပုံကိုသွင်းနေသည်။စိမ်းအိမှာ ခံလိုကောင်းနေတာမို့ မငြင်း။ပါးစပ်ကလဲ မေးရင်းလိုးနေသည်။စိမ်းအိလဲ ကျွန်တော်မေးသမျှဖြေနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံ ရဖို့ နီးလာသည်။ကျွန်တော်လဲ ဆောင့်ရင်းနဲ့ ပြီးချင်လာတာမို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်သည်။ဂုတ်ကျော်ကျော်ဆံပင်နီညိုရောင်က ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ ဝဲခါနေသည်။ကျွန်တော်လဲ တရစပ်ဆောင့်နေလိုက်ရာ စိမ်းအိမှာ နောက်တချီပြီးသွားသလို ကျွန်တော်လဲ သိပ်မကြာခင်ပြီးသွားရသည်။အပြင်မှာပြီးရမလားမေးတော့ ရတယ် အထဲမှာပဲ ပြီးလို့ပြောတာမို့ အရည်တွေကို အဖုတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်ရင်းနှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ် အမောဖြေနေလိုက်ကြသည်။
မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ ရှစ်နာရီကျော်ပြီ။စိမ်းအိ က ရေချိုးခန်းထဲမှာအသံကြားရတော့ ရေချိုးနေသည်ထင်သည်။ကျွန်တော်လဲ ညက အကြောင်းတွေးလိုက်မိသည်။နှစ်ယောက်သား ညက သုံးနာရီခွဲကျော်မှ အိပ်ကြသည်။မူးမူးနဲ့ အသားကုန်ကဲလိုက်ကြသည်။စိမ်းအိရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတော့ ကျွန်တော်နို့းနေတာကိုတွေ့ပြီး ရေချိုးဖို့ပြောကာ မို့မို့တို့ကို စောင့်ရင်း မနက်စာစားမယ်လို့ပြောတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ရေချိုးလိုက်သည်။ရေချိုးအဝတ်လဲတော့ စိမ်းအိက ညက အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးသွားသည်။ နှစ်ယောက်သား ကားနဲ့ထွက်လာရင်း ကိုညီသစ်တို့ဆီဖုန်းဆက်တော့ အိပ်ချင်မူးတူးအသံတွေနဲ့။မနက်စာစားဖို့ ချိန်းလိုက်ရင်း သူတို့ကိုစောင့်နေလိုက်သည်။ကိုးနာရီကျော်မှ ရောက်လာကြသည်။စားသောက်ပြီး သူတို့တွေက ဟိုတယ်ကိုပြန်သွားကြပြန်သည်။ဒီနေ့အဖို့ရာ ပြန်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့။မို့မို့တို့က စိမ်းအိကို ကပ်ပြီးအကူအညီတောင်းသွားသည်လို့စိမ်းအိကပြောသည်။ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိကို ဒါဆိုလဲ တို့လဲ တိုက်ခန်းပြန်ကြတာပေါ့ပြောတော့ မျက်စောင်းထိုးသည်။အဝတ်လဲဦးမယ်ပြောတာနဲ့ စိမ်းအိအဆောင်ကိုလိုက်ပို့လိုက်သည်။နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ စိမ်းအိအဝတ်လဲကာ ပြန်ထွက်လာသည်။အဝတ်အစားအပိုပါတခါတည်းယူလာသည်။ကျွန်တော်လဲ တိုက်ခန်းအပြန်မှာ ဆိုင်တခုကနေ စားစရာတွေဝင်ဝယ်လိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။တိုက်ခန်းပြန်ရောက်တော့ ထပ်ပြီးလုပ်ကြပြန်သည်။
ကျွန်တော်နဲ့ စိမ်းအိတို့နှစ်ယောက် အချိန်တိုအတွင်းအပေးအယူအတော့်ကိုမျှသည်။စိမ်းအိကို ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြာ်းဖြည်းချင်းသွင်းတော့ စိမ်းအိကလဲ သဘောကျတာမို့ သိပ်ပုံမသွင်းလိုက်ရ။စနေနေ့တရက်လုံးနဲ့တညလုံးတနင်္ဂနွေနေ့နေ့တပိုင်းအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ စိမ်းအိ အကြိမ်ပေါင်းမနည်း လုပ်ဖြစ်ကြသလို စိမ်းအိပါးစပ်ကိုလဲ လုပ်ဖြစ်သည်။စိမ်းအိက ပုလွေမဆိုး။ကျွန်တော့်ကိုအတော် စွဲသွားသည်ဆိုတာမမေးပဲနဲ့သိလိုက်သည်။အဆောင်ပြန်ပို့တော့ မျက်တွင်းတွေ ကျနေသလို လမ်းလျှောက်တာလဲ နဘ်းနည်းကွတတ။နောက်ပိုင်းမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆုံကြမယ်ဆိုတာသိနေသည်။ နောက်အပတ်တွေမှာလဲ နိုင်ထူးတို့ ကိုညီသစ်တို့က သူတို့ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဒိတ်ချင်ကြတာမို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယေညက်က သိပ်ပြီးအားစိုက်စရာမလို။လူရှေ့မှာ ရိုးသားချင်ယောင်ဆောင်နေရုံပင်။သူတို့သင်တန်းကလဲ ပြီးတော့မှာမို့. နိုင်ထူးတို့ အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်ကြတာ။တခါတလေ ကြားရက်မှာတောင် တွေ့ကြသည်။မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေပင်။ ကျွန်တော်လဲ တောင်ကြီးကိုခရီးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ ကိုညီသစ်တို့စိတ်လေသွားသည်။ ”တပတ်တောင်မှကွာ စောစောပြန်လာလို့ရရင် ပြန်လာခဲ့ဟျောင့်” ”ကိုညီသစ် အရူးအမဲသားကျွေးသလိုမလုပ်နဲ့။ဒီလောက်တချိန်းချိန်း တွေ့နေရတာ အားမရဘူးလား” ”သင်တန်းကပြီးတော့မှာကွ။သင်တန်းပြီးရင် ခုလိုတွေ့ရဖို့မလွယ်ဘူး ဒါတွေ မင်းလို ရည်းစားမရှိတဲ့ကောင်တွေနားမလည်ပါဘူးကွာ” ”အေးလေ ဟုတ်ပ ကိုညီရာ။အာစိ မခံစားတက်သေးပါဘူး” ”အောင်မယ် အောင်မယ် နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်ညီနေတာ အဲ့ဒါဆိုလဲ ပိတ်ရက်တွေ့ကြလေ” ”မရလို့ပေါ့ကွ။မင်းမရှိရင် မယ်မင်းကြီးမ စိမ်းအိက ဘယ်မှာထားမလဲ။
သူက မင်းရှိရင် အဖော်ရှိလို့ လိုက်နေတာ။မင်းမှ မရှိရင်ဘယ်နားသွားထားမလဲ။သူမှမလိုက်ရင် မို့မို့က ထွက်မရဘူး။မို့မို့ ထွက်မရရင် ငါ့ဆော်လဲ မရဘူး” ”အေးပါအေးပါ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို မပြစ်မှားနဲ့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံ ဟားဟား” ကျွန်တော် တောင်ကြီးကိုသွားခါနီးတော့ ဝေယံတို့ လင်မယားက တောင်ကြီးကိုရောက်နေသည်။ကျွန်တော်လဲ တယောက်တည်း ဟိုတယ်မှာမတည်းချင်တာမို့ ဝေယံကိုဖုန်းဆက်ကာ သူတို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူထားဖို့မှာလိုက်သည်။တောင်ကြီးရောက်တော့ ကျွန်တော့်အခန်းနဲ့ ဝေယံတို့အခန်းက မျက်နှာချင်းဆိုင်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်း။ကလေးက ကျောင်းတက်နေရလို့ အဖိုးတွေနဲ့ထားခဲ့တယ်တဲ့။ဝေယံက အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာရင်း သူ့မိန်းမ ဥမ္မကို အလည်ခေါ်လာတာပင်။ရောက်တဲ့ ညမှာ သုံးယောက်သားညစာစားရင်း သောက်ကြသည်။ဥမ္မာက ဝိုင်သောက် က်ျန်တော်တို့နှစ်ယောက်က အပြင်းသောက်ကြသည်။နောက်ရက်ကျ ကျွန်တော်လဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရှုပ်နေသည်။ညနေကျ ရေမိုးချိုးအဝတ်လဲကာ ညနေစာစားဖို့ ဝေယံဆီဖုန်းဆက်တော့ သူတာချီလိတ်ရောက်နေသည်တဲ့။သူ့မိန်းမကို ဘယ်မှ မပို့ရသေး။ကျွန်တော်အားရင် ဟိုဟိုဒီဒီ ပို့ပေးဖို့မှာသည်။ကျွန်တော်လဲ ဥမ္မာကိုခေါ်ကာ ညနေစာစားလိုက်သည်။သူ့ယောက်ကျားမရှိတာမို့ အားနာတာနဲ့မသောက်ဖြစ်။နောက်ရက်မနက်ကျ ကျွန်တော်လဲအလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်ရပြန်သည်။နေ့လည်လောက်ကျ အားတာနဲ့ ဟိုတယ်ပြန်လာကာ ဥမ္မာကိုခေါ်ပြီး အနားတဝိုက်ကို လိုက်ပို့လိုက်သည်။ညနေစောင်းမှ ပြန်ရောက်လာကာ ရေချိုးပြီးရင် ညနေစာစားဖို့ ချိန်းလိုက်ရင်း အခန်းထဲ ပြန်ကာ ရေချိုးလိုက်သည်။အဝတ်လဲကာ ဥမ္မာဆီဖုန်းဆက်တော့ ခဏလို့ပြောသည်။အတော်လေးကြာတော့မှ အခန်းတံခါးလာခေါက်တော့ ဥမ္မာဖြစ်နေသည်။
အင်္ကျီအပြာလက်ရှည်အကြပ်နဲ့ ဘောင်းဘ်ိအပျော့အကြပ်အရှည်ကိုဝတ်ထားတဲ့ ဥမ္မာရဲ့ ပုံကအတော်လန်းသည်။ကျွန်တော်လဲ အခန်းတံခါးသော့ခတ်ကာ အပြက်ထွက်လာကြသည်။အရှေ့ကသွားနေတဲ့ ဥမ္မာရဲ့တင်းကြပ်တဲ့ဘောင်းဘီအောက်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ တင်ပါးကိုကြည့်ရင်း အောက်ကကောင်ကထလာသည်။ဘော်ဒါရဲ့မိန်းမ မကောင်းပါဘူးလို့တွေးပေမယ့် မရ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ညနေစာစာရင်းဥမ္မာက ”ကိုဇွဲ သောက်ချင်သောက်လေ ဥမ္မာ့ကိုအားမနာနဲ့။ဥမ္မာလဲ နည်းနည်းသောက်မယ်” ”အိုကေလေ ဥမ္မာက ဘာသောက်မလဲ” ”ဝိုင်ပဲ” ကျွန်တော် ဝိုင်မှာလိုက်ကာ စားရင်း စကားပြောနေသည်။ဥမ္မာသောက်ရင်းနဲ့ နည်းနည်းရီဝေဝေဖြစ်လာပုံရသည်။သူ့ယောက်ကျားအကြောင်းပြောသည်။ဒီခရီးကိုမလိုက်ချင်ကြောင်း သူခေါ်လို့လိုက်လာတာတဲ့။ခုသူ့ကိစ္စမအားပဲနဲ့ တယောက်တည်းနေနေရကြောင်း ကျွန်တော်ရှိလို့တော်သေးကြောင်း အရင်ကလဲ အဲ့လိုခဏခဏဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျတုန်းကအကြောင်းတွေ ရင်ဖွင့်သည်။ဝေယံက အတ္တကြီးကြောင်းပြောသည်။ကျွန်တော်က နားထောင်သမားသက်သက်။စားသောက်ပြီးတော့ ဥမ္မာက သီချင်းဆိုရအောင်ပြောတာနဲ့ နှစ်ယောက်သားကေတီဗွီကိုလာခဲ့ကြသည်။ကေတီဗွီရာက်တော့ ဥမ္မာက ထပ်သောက်မယ်ပြောတာနဲ့ ဝိုင်တလုံးမှာကာ စားစရာမှာလိုက်ပြီး သောက်ရင်း သီချင်းဆိုကြသည်။ဥမ္မာက ဒီလိုမနေရတာကြာပြီလို့ပြောသည်။ဥမ္မာသောက်ရင်းမူးလာသည်ထင်သည်။မြူးတဲ့သီချင်းတွေဖွင့်ကာ ကသည်။ကျွန်တော့်ကိုလဲ ကခိုင်းသည်။
ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းမိန်းမမို့ စိတ်ကထိန်းထားရပေမယ့် ဥာည်ကရှိနေတာမို့ မရတော့။ကရင်း ဥမ္မာရဲ့တင်ပါးကိုကိုင်လိုက် ခါးကိုဖက်လိုက်လုပ်နေသည်။ဥမ္မာကလဲ လက်သင့်ခံသည်မို့ ကျွန်တော်လဲ ရဲလာသည်။မောလာတာနဲ့ ထိုင်ခုံမှာထိုင်အမောဖြေရင်း ဥမ္မာက ဝိုင်ကိုထပ်ထည့်မလို့အထ ယိုင်သွားကာကျွန်တော်လဲ လှမ်းထိန်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲလဲကျလာသည်။ကျွန်တော်လဲ မထူးဘူးဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းကိုငုံ့ကာ စုပ်လိုက်သည်။လက်တွေက နို့တွေကိုကိုင်မိရက်သား။ဥမ္မလဲ ပြန်နမ်းသည်။နှစ်ယောက်သားအခန်းထဲမှာ လွတ်လပ်နေတာမို့ ထိန်းမနေ။ကျွန်တော့်ရဲ့အကိုင်အတွယ် ကြမ်းကြမ်းအောက်မှာ ဥမ္မတယောက် အရည်ပျော်သွားရသည်။ ”ကိုဇွဲ တော်ပြီကွာ ဟိုတယ်ရောက်မှနော် ဟိုတယ်ပြန်ရအောင်” စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ ပြောသည်။ကျွန်တော်လဲ ပိုက်ဆံရှင်းကာ ဟိုတယ်ပြန်လာကြသည်။ဟိုတယ်ရောက်တော့ ဥမ္မာကို ကျွန်တော့်အခန်းထဲကိုခေါ်လာလိုက်သည်။အခန်းထဲရောက်တော့ ဝိုင်ကိုခွက်ထဲငှဲ့ကာတယောက်တငုံစီသောက်ရင်း ကျွန်တေယ် ဥမ္မာကိုဖက်ကာနမ်းလိုက်ပြီး အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်သည်။ဥမ္မာကလဲ အားကျမခံ ကျွန်တော့်အဝတ်တွေချွတ်သည်။ဥမ္မာ့ကိုယ်ပေါ်မှာဘရာအနက်နဲ့ပင်တီ ဇာအနက်သာကျန်တော့သလို ကျွန်တော့်ဆီမှာလဲ အတွင်းခံသာကျန်တော့သည်။ကျွန်တော်လဲ ဘရာနဲ့ပင်တီကိုချွတ်ကာ ဥမ္မာ့ကိုကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ရင်း ကာမခလုတ်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့် ဖွင့်နေသည်။ဥမ္မာတယောက် အရမ်းကိုဟော့နေပြီ။ကျွန်တော်လဲ ဥမ္မာ့ကိုထူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်အပေါ်ကနေ နေခိုင်းလိုက်တော့ ဥမ္မာကျွန်တော့အပေါ်ကနေ လီးကိုသူ့အဖုတ်ထဲထည့်ပြီးထိုင်ချလိုက်သည်။ ”အ ဟဟ ကြီးလိုက်တာ ကွာ ”မျက်နှာရှုံ့မဲသွားရင်းဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။အဆုံးထိဝင်သွားတော့ ခဏရပ်ကာ ပြန်ကြွလိုက်သည်။အပေါ်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်နေသည်။
ကျွန်တော်လဲ အောက်ကနေ ကော့ပေးရင်းနို့တွေကိုစို့လိုက် ညှစ်လိုက်လုပ်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဥမ္မာ မြင်းစီးသမားတယောက်လို တရစပ်ဆောင့်နေသည်။ ”ကောင်းလား ဥမ္မာ” ”အင့် အင့် ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ဟင့် ဟင့်” ”ဖတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ်”ကျွန်တော်လဲ ဥမ္မာ့ ဆံပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုကာမနာတနာလေးဆွဲလိုက်ရင်းကော့ပေးလိုက်သည်။ဒုတ်ခနဲ ဒုတ်ခနဲ အတွင်းကဖြစ်သွားသလို ဥမ္မာအင့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာ အရမ်းကိုကောင်းနေသည်။ဆံပင်ဆွဲတာနာလို့နာမှန်းမသိတော့။ဆောင့်ရင်းနဲ့ ”အား ကောင်းတယ် အိ အိ ပြီးပြီ ဥမ္မာပြီးပြီ အာ့ အာ့ ဟင့် ဟင့်ဟင့် ” ကျွန်တော့်အပေါ်မှောက်ကျလာကာ ခန္ဓာကိုယ်က ဆက်ခနဲ ဆကိခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ ကုပ်ခြစ်နေရင်း မှိန်းနေသည်။ကျွန်တော်လဲ ဥမ္မာ့ကို ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကာ ရင်ဘတ်နားထိ ကပ်လိုက်ပြီးအပေါ်ကနေ လိုးလိုက်သည်။အဖုတ်က အရည်တွေရွှဲနေပေမယ့် ကြပ်နေတာမို့ လိုးလို့ကောင်းနေသည်။ကျွန်တော်လဲဥမ္မာတချီပြီးသွားတာမို့ မညှာတော့ပေ။အပေါ်ကနေ အားရပါးရလိုးလိုက်သည်။ဥမ္မာတယောက် ပြီးတာမှ မကြာသေး နောက်တခါထပ်ပြီးသွားရသလို ကျွန်တော်လဲ ပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သား ခဏနားကာ အမူးလဲပြေသွားတာမို့ ဝိုင်ထပ်သောက်လိုက်ကြသည်။သောက်ရင်းနဲ့ ဥမ္မာစိတ်ကြွအောင် စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေပြောနေသည်။ဥမ္မာလဲ ပြန်ပြောလာသည်။စိတ်ပါလာကြပြန်တော့ ဥမ္မာ့ကို လီးစုပ်ခိုင်းရာ ဥမ္မာလဲ လီးကိုစုပ်ပေးသည်။ကျွန်တော်လဲ ဥမ္မာ့ကိုအရှက်ကုန်အောင် ကလိပြီး ကုန်းခိုင်းကာ နောက်ကနေ အသားကုန် လိုးသည်။ဥမ္မာက ပြောသည်။သူမ ဘဝမှာတခါမှမရဘူးတဲ့အရသာကို ရသည်တဲ့။နှစ်ယောက်သား မောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြသည်။မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ ဥမ္မာမရှိတော့။ကျွန်တော်လဲ ရေချိုးအဝတ်လဲကာ အလုပ်ကိစ္စပြေးရပြန်သည်။အားလို့ဖုန်းဆက်တော့ ဥမ္မာက သူ့အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာတဲ့။နေ့လည်အားတော့ ပြန်လာကာ နေ့လည်စာစားပြီး နှစ်ယောက်သားလုပ်ကြပြန်သည်။
ဥမ္မာတယောက် ကျွန်တော့်ကို စွဲနေပြီ။ကျွန်တော်ခိုင်းသမျှမငြင်းဆန်။ကျွန်တော်နဲ့ ဥမ္မာတို့နှစ်ယောက် ကဲလိုက်ကြတာ ဝေယံပြန်ရောက်တော့မှ အရှိန်သပ်ကြသည်။ဝေယံက နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ပြန်ရောက်လာသည်။ကျွန်တော်လဲ အလုပ်ကိစ္စပြီးပြတ်တော့ ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့သည်။ဝေယံက မပြန်သေး။ကျွန်တော့်ကိုမပြန်သေးဖို့ပြောပေမယ့် ကျွန်တော်လဲ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ မေမေက ကျွန်တော့်ကို မမဝတ်ရည်တို့အိမ်ကိုသွားခိုင်းသည်။သမီးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ အိမ်ကို ခေါ်လာဖို့ပြောတာပင်။ကျွန်တော်လဲ မမဝတ်ရည်အိမ်ကိုသွားကာ သမီးကို သွားခေါ်လိုက်သည်။မမဝတ်ရည်က ကျွန်တော့်ကို အိမ်ကိုမလာလို့ဆူသည်။ကျွန်တော်လဲ ရီပဲနေလိုက်သည်။မမဝတ်ရည်က ကြာလေ ပိုပိုလှလာလေ။ကျွန်တော်လဲ မမဝတိရည်နဲ့ သမီးလေးအိ ကိုခေါ်ကာ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ကိုစိုးခိုင်က မရှိ။ခရီးသွားနေသည်။လမ်းမှာ မမဝတ်ရည်ကို အိမ်ဖော်ငှါးပါလားပြောတော့ မလိုဘူးတဲ့လေ။သမီးက အိမ်ရောက်တော့ မေမေနဲ့တွေ့ကာ ချွဲနေတော့သည်။မမဝတ်ရည်က ကျွန်တော့်ကို အပြင်လိုက်ပို့ဖို့ပြောသည်။သမီးကတော့ မလိုက်တော့။မမဝတ်ရည် သွားတာက သူ့မိတ်ဆွေ တယောက် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဝတ်ဖို့အတွက် အင်္ကျီအပ်ထားရာ သွားယူခြင်းဖြစ်သည်။အပြန်ကျ ဆိုင်တခုမှာထိုင်ရင်း အေးဆေးစကားပြောဖြစ်ကြသည်။ မမဝတ်ရည်က ကျွန်တော့်ကို အိမ်ထောင်ပြုဖို့တိုက်တွန်းတာကသည်။ဖေဖေနဲ့မေမေက မြှောက်ပေးတာထင်သည်။ချစ်သူရည်းစားအတည်တကျထားပြီး အိမ်ထောင်ပြုစေချင်သည်တဲ့။ကျွန်တော်လဲ ခေါင်းတော့ငြိမ့်လိုက်ရသည်။ပြီးတော့ မမဝတ်ရည်က ကိုစိုးခိုင်အကြောင်းပြောပြသည်။
စီးပွားရေးအရမ်းကိုသောင်းကျန်းနေသည်တဲ့။မိန်းမနဲ့ကလေးတောင် သိပ်အချိန်မပေးတော့ဘူးလို့ ညည်းပြောလေးပြောတာကို ကြည့်ရင် ကျွန်တော် သနားသွားမိသည်။တခြားမိန်းကလေးတွေဆို သနားမိမှာမဟုတ်ပေမယ့် မမဝတ်ရည်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ရင်ခုန်ပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့တိတ်ခိုးချစ်ဦးသူကိုး။ကျွန်တော်တို့ စကားအကြာကြီးပြောရင်းနဲ့ မမဝတ်ရည်တို့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းတစွန်းတစသိလိုက်ရသည်။ကိုစိုးခိုင်က စီးပွားရေးကို မဲနေတော့ အိမ်တွင်းရေးကို လစ်ဟာနေပုံရသည်။တွေ့တဲ့အခါကျရင် သတိပေးဦး မှလို့တွေးလိုက်မိသည်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်လဲ သမီးလေးနဲ့ဆော့လိုက် စလိုက်နဲ့။မမဝတ်ရည်တို့သားအမိက နှစ်ညလောက်အိမ်မှာအိပ်သွားတော့ ကျွန်တော်လဲ ဘယ်မှမသွားရတော့။ ကျွန်တော်ရုံးပြန်တက်တော့ ကိုညီသစ်တို့ကပျော်နေသည်။စိမ်းအိကလဲ မက်ဆေ့ခ်ျမှာတွေ့ချင်တယ်လို့ပို့ထားတာမနည်း။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲ တွေ့ကြဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲ ကြသည်။ထုံးစံတိုင်းသောကြာနေ့ညကျတော့ ချိန်းကာ လည်ကြရင်း ကိုညီသစ်တို့ နိုင်ထူးတို့က လစ်သွားတော့ ကျွန်တော်နဲ့စိမ်းအိက ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကိုသွားကြသည်။တိုက်ခန်းရောက်တော့ စိမ်းအိကို ကျွန်တော် ပုလွေပေးခိုင်းသည်။စိမ်းအိ ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ကျွန်တေယ် ပြီးသွားရသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိရဲ့အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်တော့ စိမ်းအိတယောက်စိတ်အရမ်းလာနေသည်မို့ အဖုတ်ကအရည်တွေကမဆွရခင် ရွှဲနေသည်။ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိရဲ့အစေ့အဖုတ်နဲ့ဖင်ပေါက်တွေကို ကလိပေးလိုက်ရာ စိမ်းအိတယောက်ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ ”ကို စိမ်အိကို လိုးပေးတော့ကွာ မနေနိုင်တော့ဘူး ခံချင်ပြီ” ”ဘယ်လိုခံချင်လဲပြောလေ” ”ကုန်းပေးမယ် စိမ်းအိ ဖင်တွေကိုရိုက်ပြီးလိုးပေး” fbမှာ ယောက်ကျားကို ဘယ်လောက်သတိရ ဘယ်လောက်လွမ်းတယ်ဆိုတာခဏတိုင်းတင်နေတက်တဲ့ စိမ်းအိ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ကုန်းပေးနေပြီ။
ကျွန်တော်လဲ စိမ်းအိရဲ့ နောက်ကနေ စိမ်းအိ ဖင်တွေကို ရိုက်ရင်း ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ”အ အ ကောင်းတယ်ကွာ ကို ရာ စိမ်းအိ အ. ဟင့် ဟင့် အရမ်းတင်းနေတာ ခုမှ ပဲအ အ ” ”ကောင်းလား စိမ်းအိ ငါလိုးတာကောင်းလား” ”ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းကြိုက်တယ် အ အ အ””ဖတ် ဖတ် ဗြ် ဗ်ြစ် ဖတ် ဖတ်” ကျွန်တော်လဲ စအိုပေါက်ကို နှိုက်ရင်းလက်တဖက်က ဖင်ကိုရိုက်ကာ လိုးနေသည်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ စိမ်းအိ ပြီးချင်လာကာ ပါးစပ်က တအီးအီးနဲ့အော်လာသည်။ကျွန်တော်လဲ ခါးကိုကိုင်ကာ အသားကုန်ဆောင့်လိုက်ရာ စိမ်းအိ ပြီးသွားသည်။ကျွန်တော်လဲ ဆောင့်ချက်ကို မနားတော့ပဲ တရစပ်ဆောင့်လိုက်သည်။စိမ်းအိ မှာ ပြီးသွားပေမယ့် ဆောင့်ချက်တွေက တရစပ်မို့ တအားအားနဲ့အော်နေသည်။ကျွန်တော်လဲ မညှာတော့။ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်းနဲ့ ပြီးချင်လာတာမို့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းညှစ်ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ”ကို ဆောင့်ဆောင့် စိမ်းအိ ပြီးတော့မယ် အ အ ” စိမ်းအိ ထပ်ပြီး ပြီးတော့မည်။ကျွန်တော်လဲ မနားတမ်းဆောင့်နေလိုက်ရာ လီးတခုလုံးကျဉ်တက်လာကာ အရည်တွေကို စိမ်းအိအဖုတ်ထဲကိုပန်းထည့်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်ရာ စိမ်းအိလဲ အားခနဲတချက်အော်ကာ အဖုတ်က လီးကို ညှစ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ မှိန်းနေကြသည်။စိမ်းအိက ကျွန်တေ်ာ့ကိုဖက်ထားသည်။အတော်လေးကြာမှ နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ ဆေးကြောကာပြန်ထွက်လာသည်။ပြီးတော့ ဝယ်လာတဲ့ အစားအစာတွေ ဘီယာတွေယူကာ သောက်ကြ စားကြရင်း နောက်တခါထပ်ပြီးစိတ်ပါလာတော့ ပြန်ပြီးလိုးကြပြန်သည်။စိမ်းအိကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လိုးဖြစ်သည်။ ခုချိန်ထိတော့ နောက်ပေါက်ကိုမဖွင့်ရသေးပေ ………ပြီးပါပြီ။